Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Nizeria
Tantara mikasika ny Nizeria
06 Aogositra 2019
Mpanoratra Nwachukwu Egbunike · Ady & Fifandirana
"Nanome toky ahy ny hiverenan'i Leah izy sy hoe niasa mafy ho amin'izany ny governemanta. ... Taorian'izay, nangina tanteraka satria tsy nahazo vaovao intsony momba an'i Leah izahay"
05 Aogositra 2019
Mpanoratra Netizen Report Team · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Miatrika fiampangana ireo mpikatroka ao Nizeria sy Rosia noho ny "fanevatevana antserasera", mikendry ireo mpanao gazety "anti-Pakistan" ny fanentanana amin'ny Twitter ary miverina ankehitriny ny aterineto ao Maoritania.
09 Jolay 2019
Zo hahazo vaovao: Manoloana ny lalàna vaovao momba izany, hanara-dia an'i Nizeria ve i Ghana?
Mpanoratra Nwachukwu Egbunike · Ghana
Manamafy ny UNESCO fa "ampahany feno amin'ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra ny fahalalahana hahazo vaovao." Ao amin'ny faritra, voasoratra ao amin'ny Sata Afrikanina momba ny Zon'olombelona sy ny Vahoaka sy ny Fanambarana ny fitsipika momba ny Fahalalahana maneho hevitra ao Afrika ny zo ho an'ny fahalalahana maneho hevitra.
16 Jona 2019
Ny herinandron'ny 19/01/2006 tao amin'ny blaogy Nizeriàna
Mpanoratra Imnakoya · Mediam-bahoaka
Azoko antoka fa na iza na iza namorona an'ity fehezanteny manaraka ity: "Tontolon-dry zareo lehilahy io" dia tsy maintsy nivadibadika any ampasany any noho ny lahatsoratr'i Olaniyi David Ajao mitondra ny lohateny hoe: "Ireo vehivavy filoham-panjakana".
01 Jona 2019
Bilaogy Nizeriana 2005: Fiaramanidina, rafi-pampianarana, fombam-pivavahana
Mpanoratra Sokari Ekine · Mediam-bahoaka
Taorian'ny fianjerana fiaramanidina telo vao haingana tany Nizeria, nanoratra andiana tatitra mahaliana momba ny Sehatry ny Fiaramanidina Nizeriana i Chippla. Mandinika ny tsirairay amin'ireo fianjerana, ny valintenin'ny fampahalalam-baovao Nizeriana sy ny Governemanta ny tatitra.
30 Mey 2019
Mpanoratra Nish Matenjwa · Afrika Atsimo
29 Mey 2019
Mpanoratra Edward Popoola · Mediam-bahoaka
28 Mey 2019
Fampahafantarana avy amin'ny bilaogy nizeriana (2005)
Miresaka ny lahatsoratra vao haingana 419 (hosoka) izay nivezivezy nanerana ny tontolon'ny bilaogy sy ny fampitam-baovo antserasera ny LAHATSORATRA TAMIN'NY HERINANDRO avy amin'i Naija Jams.
23 Mey 2019
Mpanoratra Kọ́lá Túbọ̀sún · Fiteny
Ny raibeko, 92 taona, toy ireo Nizeriàna mitovy taona amin, dia mahay mamaky sy manoratra ny teny Yorùbá. Saingy noho izy ireo tsy mahay ny teny anglisy, dia lasa anjorom-bala amin'ny resaka nomerika ry zareo